Panadol (ပါရာစီတမော) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Panadol (ပါရာစီတမော)
Panadol (ပါရာစီတမော) ကဘာလဲ။
Generic Name: Panadol (ပါရာစီတမော) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Panadol (ပါရာစီတမော) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Panadol ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုသက်သာရန်နှင့် အဖျားကျစေရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် Panadol ကို ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်များရောင်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း စသည်တို့ အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Panadol တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများပေါ် မူတည်၍ အချို့သော ကိစ္စများ ဥပမာ အအေးမိတုတ်ကွေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားကိစ္စများစွာအတွက် အသုံးပြုနိုင်သေးသည်။ ပိုမိုသိရှိရန် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Panadol (ပါရာစီတမော) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Panadol ဆေးပြား (သို့) ရေဆူဆေးပြား(သို့) ဆေးတောင့်ကို ၁ပြားမှ ၂ပြားထိကို ၄နာရီ (သို့) ၆နာရီခြားပြီး သောက်သုံးနိုင်သည်။ တနေ့လျှင် ၈ပြားထိ အများဆုံး သောက်သုံးနိုင်သည်။
Panadol Extra ဆေးကို အထိမခံနိုင်အောင် နာကျင်နေသူများ အနေဖြင့် ၁ပြားမှ ၂ပြားထိကို ၄နာရီ (သို့) ၆နာရီခြားပြီး သောက်သုံးနိုင်သည်။ အများဆုံးပမာဏ။ ၄၀၀၀ မီလီဂရမ်/၅၂၀ မီလီဂရမ် (acetaminophen/caffeine)
ဖျားနာခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်းများအတွက် ၄နာရီ (သို့) ၆နာရီကြာတိုင်း စအိုမှထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အများဆုံးပမာဏ။ ၃၉၀၀ မီလီဂရမ်/၂၄နာရီ
ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ပါးစပ်မှ သောက်ပါ။ ဆေးဘူးပေါ်တွင်ပါဝင်သော ညွှန်ကြားချက် အားလုံးကို လိုက်နာပါ။
အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာလျှင် ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ထည့်သွင်းရာတွင် လွယ်ကူစေရန် ဆေးတောင့်ကို စိုစွတ်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး အူမကြီး (စအို) တွင် ထည့်သွင်းပါ။
အခန်းအပူချိန်ရှိသော သောက်ရေဖန်ခွက်ထဲ ဆေးပြား(များ) ထည့်ပါ။
ဆေးပြားအားလုံး ပျော်ဝင်သွားပြီး အမြှုပ်ကုန်တဲ့အထိ စောင့်ပါ။
မည်သို့သောက်သုံးရမယ်ဆိုသည်ကို ကျွမ်းကျင်သူများထံ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Panadol (ပါရာစီတမော) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Panadol ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့ရန်၊ မစိုစွတ်မှုမရှိစေရန် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်စေရန် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Panadol ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသည့် ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘူးအခွံတွင် ပါသည့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Panadol ကို အိမ်သာတွင်း ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းကို မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့လျှင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားလျှင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ ဆေးဝါးများအား စနစ်တကျ မည်သို့ စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုသည်ကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Panadol (ပါရာစီတမော) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် သင်၏ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်သော ဆေးများကိုသာ သောက်ပါ။
အညွှန်းမလိုသော အခြားဆေးများ သောက်သုံးနေလျှင် (ဥပမာ-သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ) သင့်ရဲ့ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ပါ။
Panadol တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ထံတွင် အခြားရောဂါများရှိလျှင် (ဥပမာ Phenylketonuria ကဲ့သို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွံ့ဖြိုးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အထူးစားသောက်မှုပုံစံ လိုအပ်သည့်ရောဂါ သို့ ဆီးချိုရောဂါ) ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ Panadol ဆေးပုံစံအချို့တွင် ဝါးစားနိုင်သည့် အချိုဓါတ်ပါဆေးပြားများ ဖြစ်နေသည်ကို သင်သတိပြုမိနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Panadol (ပါရာစီတမော) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလဲ
Panadol ဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ Panadol ဆေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Panadol (ပါရာစီတမော) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
သွေးပါသောဝမ်း၊ (သို့) ဝမ်းအမည်းရောင်များသွားခြင်း
ဆီးများ သွေးရောင် (သို့) အရောင်နောက်နောက် သွားခြင်း
ချမ်းတုန်၍ (သို့) မချမ်းဘဲ အဖျားတက်ခြင်း (ဆေးမသောက်မီဖြစ်ခြင်းမဟုတ်၊ ဆေးသောက်ရသော အခြေအနေကြောင့် မဟုတ်)
နောက်ကျော (သို့) ကိုယ်ဘေးတွင် စူးရှပြင်းထန်စွာ နာကျင်ခြင်း
အရေပြားတါင် အကွက်များ၊ အင်ပျဉ်များထလာပြီး ယားယံခြင်း
လည်ချောင်းနာခြင်း (ဆေးမသောက်မီ ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်၊ ဆေးသောက်ရသော အခြေအနေကြောင့် မဟုတ်)
နှုတ်ခမ်းနှင့်ပါးစပ်တွင် အနာများ၊ အဖြူစက်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးယိုခြင်း၊ သွေးခြေဥခြင်း
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပင်ပန်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Panadol (ပါရာစီတမော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Panadol သည် သင်ယခု သောက်သုံးနေသည့် တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသည့် ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် သို့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။)
Panadol သည် သင်ယခု သောက်သုံးနေသည့် တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုဖြစ်နိုင်ပြီး သောက်သုံးသည့် ဆေးအာနိသင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
သွေးထဲတွင် အတက်ကျဆေး ပမာဏ လျော့နည်းနိုင်ခြင်း (phenytoin၊ barbiturates နှင့် carbamazepine စသည်)
Warfarin ကဲ့သို့ သွေးကျဲဆေး၏ သက်ရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း
metoclopramide နှင့် domperidone ဆေးများကို စုပ်ယူမှု ပိုမိုမြန်ဆန်စေခြင်း
probenecid နှင့် chloramphenicol ဆေးများ၏ သွေးတွင်ပါဝင်သည့် ပမာဏကို မြင့်တက်စေခြင်း
colestyramine စုပ်ယူမှု ပိုမိုနှေးကွေးစေခြင်း
phenothiazine နှင့်တွဲသောက်လျှင် ကိုယ်ခန္ဓါအပူချိန် အလွန်ကျဆင်းခြင်း
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Panadol (ပါရာစီတမော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
(Panadol သည် အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်မလာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။)
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Panadol (ပါရာစီတမော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Panadol (ပါရာစီတမော) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Panadol (ပါရာစီတမော) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
ကိုယ်အလေးချိန်ပေါ် မူတည်၍ ပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး အသက် ၁၂နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် တခါတိုက်စာ ၁ကီလိုဂရမ်တွင် ၁၀-၁၅ မီလီဂရမ်နှုန်းဖြင့် ၄နာရီ (သို့) ၆နာရီကြာတိုင်း သောက်သုံးနိုင်သည်။ တနေ့လျှင် ၁ကီလိုဂရမ်တွင် ၆၀ မီလီဂရမ်နှုန်း အများဆုံး သောက်သုံးနိုင်သည်။
Panadol Extra ဆေးကို အသက် ၁၂နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် ညွှန်းထားခြင်း မရှိပေ။
Panadol (ပါရာစီတမော) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
medication ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Panadol ဆေးပြား/ဆေးတောင့် ၅၀၀ မီလီဂရမ် ပါရာစီတမော
Panadol extra ဆေးပြား/ဆေးတောင့် ၅၀၀ မီလီဂရမ် ပါရာစီတမောနှင့် ၆၅ မီလီဂရမ် ကဖိန်း
Panadol စအိုဆေးတောင့် ၅၀၀ မီလီဂရမ် ပါရာစီတမော
Panadol ရေဆူဆေးပြား ၅၀၀ မီလီဂရမ် ပါရာစီတမော
Panadol ဝါးစားနိုင်သည့် ဆေးပြား ၁၂၀ မီလီဂရမ် ပါရာစီတမော
Panadol အရောင်မပါသော ကလေးဆေးရည် ၂၀ မီလီလီတာ
Panadol အရောင်မပါသောဆေးရည် ၂၀၀ မီလီလီတာ
Panadol ဆေးရည် ၁၀၀ မီလီလီတာ
Panadol စအိုဆေးတောင့် ၁၂၅ မီလီဂရမ် ပါရာစီတမော
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားသည့် အခြေအနေတွင် အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ
အရေးပေါ်ဌာနသို့ သွားသည့်အခါ ဆေးအညွှန်းစာများ၊ မညွှန်းသော်လည်း မိမိဖာသာ ဝယ်ယူသောက်သုံးသော ဆေးဝါးများ စာရင်းပြုစု ယူဆောင်သွားရန် အရေးကြီးပါသည်။
Panadol ဆေးကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့လျှင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံး သောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုလျှင် လွတ်သွားသည့်အကြိမ်ကို ကျော်၍ ပုံမှန်အချိန်တွင်သာ သောက်သုံးပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။
Panadol. https://www.panadol.com.au/. Accessed September 8, 2016. Accessed October 13, 2016.
အသည်းကင်ဆာသမားများ ရှောင်ရမည့် ဆေးဝါးများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် acetaminophen ဆေးအသုံးပြုမှု